Mampiaraka Soso-kevitra ho an'ny Vehivavy Izay Te-Lehilahy koreana. Korea Mampiaraka Soso-Kevitra
Mampiaraka Soso-kevitra ho an’ny Vehivavy Izay Te-Lehilahy koreana. Korea Mampiaraka Soso-Kevitra
Rehefa mampiaraka ny koreana lehilahy misy ny tsy fitovian’ny lahy sy vavy, fa koa ny ara-kolontsaina iray ihany koa. Ny voalohany (ary mora indrindra) ny zavatra ny fanovana izay namerina mihantona avy miaraka amin’ny namanao. Ohatra, fa tsy handeha ny rehetra-ny ankizivavy salady fisotroana ho an’ny sakafo fahazoan-dalana aho dia mandeha any amin’ny trano fisakafoanana koreana izay ry zalahy mandehandeha. Manomboka mandeha any ny fivarotana kafe fa ry zalahy handeha any amin’ny namana. Haka ny labiera miaraka amin’ny namana ao amin’ny trano fisotroana na kitro (koreana-style fisotroana.) Hodidinin ny lehilahy koreana matetika kokoa, ary tsy ll mety mahita lehilahy iray izay ll tahaka anao sy izay ll toy izany. Ny mampiavaka ny lehilahy koreana s fitsipika ho an’ny ara-batana tarehy ambony. Izay dikany, satria koreana ny vehivavy miasa mafy mitady tsara.
Raha ianao zava-dehibe ny fipetrahana mahafatifaty lehilahy koreana, dia ny d tsara kokoa hones ny fitaovam-piadiana ny tarehiny sy ny vatana. Maro loatra ny Tandrefana vehivavy avy any Korea, get natahotra ny fifaninanana sy kivy. Ny s fotoana hanaovana ny hijoro, sa t hevitrao. Anao koa te-mahafatifaty lehilahy koreana sy ianao ll hanaovana izay takiana mba hahazoana iray, marina. Toy izany, fahazoan-dalana handeha ho any amin’ny fanaovana fanatanjahan-tena tsy tapaka sy hanam-paharetana toy ny vatanao mijery tsara kokoa. Ianao ll mahalala rehefa koreana ry zalahy manomboka mijery anao hahafantatra bebe kokoa tapaka. Na rehefa mahita ny bandy namana manomboka na complementing ianao, na manome anao kokoa ny fotoana. Koa Tandrefana maro ny vehivavy matahotra ny maha-vehivavy toa azy, ary aza t mahatakatra ny hery sy hatsaran-tarehy izany. Ny tena fitarainana azoko avy ny lehilahy koreana namana fa izy ireo dia natahotra Tandrefana ny vehivavy. Ny s tsy hoe ry zareo aza t mieritreritra ry zareo fa manintona ny s Tandrefana vehivavy hampitahorana azy ireo. Ny s na dia tsy miaraka ny ara-batana mitarika.
Izaho ihany koa no miresaka momba ny resaka
Aoka izy hitarika ny resaka, ary miandry fotsiny ny tari-dalana. Mamela ny tenanao mba ihany koa ny haneho ny maha-vehivavy amin’ny fihetsiny. Mitondra humbler zazavavy kely ny rivotra toy izany izy dia afaka mahatsapa ho toy izy no mahalala ny anjara asany araka ny fiahiana sy ny fiarovana ny lahy. Raha te-hanao azy io ho mora sy ahazoana aina noho ny tsara koreana lehilahy, avy eo aho fahazoan-dalana fianarana ny teny. Raiso ny fampianarana sy ny hanao azy io ho laharam-pahamehana mba hianatra ny koreana sy ny hiarahana amin’ny koreana ny vehivavy. Fotsiny izy ireo mba hampahafantatra anao ny sasany mahafatifaty koreana ry zalahy. Azonao atao ny mamaky bebe kokoa mikasika azy ireo amin’ny alalan’ny fanindriana ny rohy.
Ity no farany amin’ny fahaiza-manao
Inona no azonao atao azy hiresaka ianao tsy tonga manerana ho mora. Mandritra izany fotoana izany ny fomba mety hahatonga azy mahatsapa ho toy izy no niresaka taminao toy izany fa afaka manana ny hambom-pon’ny tena. Fahazoan-dalana aho ka nanome azy fialan-tsiny mba hifaneraserana amin’ny aminareo fa s azo ekena ara-tsosialy. Ohatra, ao amin’ny fivarotana kafe afaka mahazo latabatra manaraka ho azy (amin’ny ny koreana boky) ary angataho aminy izay teny sasany dia midika hoe.
Izy ll mihoatra noho ny mety hanampy anao
Ataovy azo antoka anao ny hisaotra azy, ary raha izany no izy dia liana ary (mahery fo) ampy izy ll hanohy ny fifandraisana. Ianao ll manao azy famindram-po amin’ny fanaovana azy ho toy ny rescuer sy ny boosting ny hambom-pon’ny tena. Ianao koa ve naseho ny teny toetra sy efa nanome azy fialan-tsiny mba hiresaka aminy. Raha te-hahatakatra ny lehilahy amin’ny ankapobeny, ny fahazoan-dalana avy nanamarina ny Fifandraisana manam-pahaizana momba ny Kara Oh s Olona Nanao Mora. Ianao ll hahita ny fototry ny fomba azafady ny olona na aiza na aiza. Miombon-kevitra amin’izany aho be dia be ny hevitra sy ny faniriana fa ny vehivavy kokoa dia ny fomba toy izany koa. Fantatro ianao don t te-hahatsapa toy ny ianao namadika ny tenanao ho an’ny lehilahy koreana. Ny s tsy momba namadika tahaka ny momba ny flexibly camouflaging ny tenanao mba hifanaraka ny zavatra tiany. Raha tany lehibe koreana lehilahy, izy ll koa manomboka manova ny tenany ho mitovy inona tianao ao amin’ny lehilahy. Na ahoana na ahoana no mahafinaritra ho anao hahita ny tsara indrindra koreana ny olona. Dia ny tsara indrindra koreana ny olona be taona? Hahita soso-kevitra ho an’ny mampiaraka ny anti-panahy eto
← Afaka mahazo ny virtoaly koreana laharana finday izay afaka mandray ny fanamarinana fehezan-dalàna, avy amin'ny Google ny Feo. Mampiaraka ao Korea
Chatroulette Alternatives →